03.Oct.2018 19:10Fifidianana : Ahiana ny hisian'ny kandida hitarika korontana.
03.Oct.2018 11:34Asan-jiolahy : Solosaina 2 sy Finday 4 no lasan'ny Jiolahy
06.Avr.2018 19:14CHRISTINE RAZANAMAHASOA : TSY MAHALALA MENATRA, MIBODO TRANOM-PANJAKANA
06.Avr.2018 19:06HERY RAJAONARIMAMPIANINA : TSY AZO EKENA NY FANAKORONTANANA
04.Avr.2018 14:45ANTENIMIERAM-PIRENENA : HANOMBOKA NY 5 AVRILY NY FIVORIANA TSY ARA-POTOANA FAHA-4
03.Avr.2018 18:56TIM SY MAPAR MPANOHITRA : MPITARI-BATO VILAM-BAVA
03.Avr.2018 18:55AFRIKA ATSIMO : NODIMANDRY I WINNIE MANDELA
03.Avr.2018 18:54PAKA : AMPOLONY NO MATY NOHO NY LOZAM-PIFAMOIVOIZANA
03.Avr.2018 18:53LALAM-PIFIDIANANA : TSY NAHOMBY IREO MPANAKORONTANA NA NIOMANA MIALOHA AZA
20.Mar.2018 20:07TSIMBAZAZA : MANAO IZAY HAMPITARAZOKA NY FANDANIANA NY LALAM-PIFIDIANANA IREO MPANOHITRA
20.Mar.2018 20:02NICOLAS SARKOZY : MIATRIKA MPANAO FAMOTORANA
Miatrika famotorana any Frantsa ankehitriny ny filoha Frantsay teo aloha Nicholas Sarkozy. Antony, voampnga ho nahazo famatsiam-bola tsy ara-dalàna mitentina 50 tapitrisa Euro avy amin'ny fanjakana libianina izy ny taona 2007, nandritra ny fampielezan-kevitra. Famatsiam-bola izay sokajian'ny mpitsara frantsay fa kolikoly avo lenta.
20.Mar.2018 20:00FILOHA RAJAONARIMAMPIANINA TANY AMBILOBE : MILA MITSINJO LAVITRA ISIKA
Tsy misy hita ireo mpanao politika samihafa milaza fa mitsinjo ny vahoaka rehefa ao anatin'ny fotoan-tsarotra. Voaporofo izany tany Ambilobe, voaporofo fa fisehosehoana sy fampifalifaliana vahoaka no tena talentan'izy ireny, amin'ny maha-fotoan'ny fifidianana ny vanim-potoana amin'izao fotoana izao. Manohy ny fanampiana ny vahoaka nizaka ny mafy noho ny fandalovan'ny rivo-doza Eliakim farany teo ny governeamnta rehera, taorain'ny fisantarana izany nataon'ny filoha omaly tany Ambilobe.
19.Mar.2018 19:18ELIAKIM : MIDINA IFOTONY MIJERY NY FAHAVOAZANA SY MITONDRA FANAMPIANA NY FILOHAMPIRENENA
Ny faritra avaratry ny nosy no nanombohany izany fitsidihana izany, niatomboka tao Ambilobe io atoandro io. Nandritra izany no nijereny ireo faharavana tao amin'ity Distrika ity. Isan'ny nojeren'ny Filoha akaiky tamin'izany ohatra ny fianjeran'ny tetezana tao Bemaranja. Ny Distrikan'Ambilobe izay isan'ny nitondra faisana indrindra amin'izao fandalovan'ny rivo-doza Eliakim izao, no nanombohany izany, efa miomana hijery ireo faritra sasany ihany koa ny governemanta. Nanome hery nitondra fanampiana ho an’ireo vahoaka tra-boina manerana ny Distrikan'Ambilobe, ny delegasionina no tarihin'ny filoham-pirenena. Vary 400 gony, voamaina 200 gony, ary tôle 1000 takelaka no nentiny ho an'Ambilobe.
19.Mar.2018 19:10LALAM-PIFIDIANANA : MIOMANA NY HANAKORONTANA NY TIM SY NY MAPAR ?
Efa miomana hiditra amin'ny dingan'ny fanakorontanana amin'izay ireo antoko politika hafa, toy ny TIM, sy ny Mapar rehefa fakafakaina ny fanehoan-kevitra samiahfa teny Tsimbazaza. Isan'ny maro an'isa tany anatin'ny asam-baomiera ireo depiote mpanohitra, izany hoe nandray anjara tamin'ny famolavolana izany, saingy nasongadin'izy ireo indray fa hanakorontana io lalàna io. Arahantsika ato anatin'ny fampahalalam-baovao any antsipirihan'ny fanefahoan-kevitra momba izany.
19.Mar.2018 19:09LALAM-PIFIDIANANA : MIOMANA NY HANAKORONTANA NY TIM SY NY MAPAR.
19.Mar.2018 18:05FARI-PIAINANA : NIAKATRA KELY NY FAHEFA-MIVIDIN'IREO MANANA FARI-PIAINANA ANTONONY
Fiharian-karena. Tranga maro no ahafahana milaza ankehitriny fa niakatra ny fahefa-mividin'ireo manana fari-piainana antonony na ny Classe moyenne eto amintsika. Isan'ireo ny fanjifàna ny fiara bonne occasion izay vidiana manodidina ny 10 hatramin'ny 16 tapitrisa ariary. Torak'izany ihany koa ny fanjifàna ireny karazana vokatra mila teknolojia ireny, toy ny finday sy ny solosaina. Manamarina izany ny tarehimarika avy amin'ny Instat.
09.Mar.2018 20:28TOLIARY : 65 NO VOASAMBOTRA NOHO NY FANAKORONTANANA
Toliary, nisahotaka androany. Tovovavy iray nisy namono tamin'ny fomba feno habibiana no niantombohany, ary niafara tamin'ny fihetsiketsehana lehibe androany. Nanao fihetsiketsehana tao an-tampon-tananan'i Toliary ny mponina androany, nihidy avokoa ny mpivarotra rehetra. 65 no voasambotra.
09.Mar.2018 20:27KOLIKOLY, FANADINANA HO MPITSARA : NISY NANDORO NY POROFO TAO AMIN'NY ENMG
Iza no manana tombony amin'ny tsy fitohizan'ny fanadihadiana mahakasika ny kolikoly nitranga nandritra ny fanadianana ho mpitsara sy mpirakidraharha izay nofoanana farany teo. Nisy nandoro io atoandro io ireo taratasim-panadianana izay isan'ny antonta-taratasy porofo na element de preuve eo am-pelatanan'ny Bianco.
02.Mar.2018 09:22LALANA MIFEHY NY FIFIDIANANA FILOHAMPIRENENA : TSY MANISY OLANA NY ANKAMAROAN'NY OLOM-BOAFIDY
Ao anatiny tanteraka ny fandinihana ilay lalàna mifehy ny fifidianana filoham-pirenena ankehitriny, ireo eny anivon'ny antenimieram-pirenena. Amin'ny ankapobeny, tsy manisy olana momba ny votoatin'izany lalàna izany ireo olom-boafidy izay mandinika ny antsipirihan'izany. Maro kosa ireo mpanao politika no miezaka misintona ny andininy vitsivitsy amin'izany, entina hanaporofoana fa notefena ho an'ny mpitondra fanjakana ankehitriny io lalàna io. Andrasana ny fotoam-pivoriana tsy ara-potoana faharoa ataon'ny eny anivon'ny antenimieram-pirenena 2 tonta hanapahana izany.
22.Fév.2018 18:43KARATRA MAHA-MATIANINA : HITSAKITSAHAN'NY GEPIMM NY ZON'NY MPANAO GAZETY
Nampahafantatra ny fianakaviam-ben'ny asa fanaovan-gazety ny minisiteran'ny serasera fa efa niala nenina tanteraka tamin'ireo orinasan-gazety izay manakana ny mpanao gazety miasa ao aminy, tsy ahazo ny karatra maha-matihanina ho an'ny mpanao gazety. Vonona tamin’ny fifampiresahana mikasika ity raharaha ity ihany koa ny minisitera saingy nanakatom-baravarana hatrany izy ireo, araka ny fampitam-baovaon’ny minisiteran’ny serasera androany.
22.Fév.2018 18:42KOLIKOLY : NISY FIRENENA NAHAVITA EZAKA TSARA NOHO I MADAGASIKARA
Tsy mahafa-po ny ady atao amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Nanaratsy endrika an'i Madagasikara ihany koa ireo resa-bola nifamatotra tamin'ny kolikoly nalaza tamin'ny taona 2017. Ankoatra ireo lesoka maro eto an-toerana, nisy ny firenena hafa nahavita ezaka betsaka sy tsara noho isika hoy ny Tale Jeneralin'ny Bianco Jean Louis Andriamifidy, ka nahavery toerana 10 an'i Madagasikara.
22.Fév.2018 12:22NOFOANANA NY FANADINANA DINGANA VOALOHANY HIDIRANA HO MPIANATRA MPITSARA SY MPIRAKI-DRAHARAHA
Nofoanana ny fanadinana ho mpianatra mpitsara sy mpiraki-draharaha natao ny 06 sy 07 febroary. Haverina afaka 3 na 4 herinandro ity fanadinana ity, hoy ny fanambaran’ny minisitry ny fitsarana androany. Anton’izao fanapahan-kevitra izao ny fisian’ny ahiahy maro amin’ny fanaovana kolikoly nandritra ity fifaninanana ity. Nisy ihany koa ny fanendrena tomponandraikitra vaovao eo anivon’ny sekoly izay hitantana ny famerenana izay fanadinana izay.
22.Fév.2018 09:23FIVORIANA TSY ARA-POTOANA, ANTENIMIERA : MANOMBOKA NY ALATSINAINY 26 FEBROARY 2018
Raikitra ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany ho amin'ity taona ity eny anivon'ny antenimieram-pirenena. Nivoaka omaly ny didim-panjakana mampiantso ireo depiote hiatrika izany fivoriana izany, araka ny voalazan'ny andininy faha-76 sy faha-85 ao amin'ny lalam-panorenana malagasy. Tsy ihoatra ny 12 andro ity fivoriana tsy ara-potoana ity ary laharam-pahamehana amin'izany ny fandinihana ny volavolan-dalàna 3, ahitana ny lalàna mifehy ny fifidianana sy ny fitsapan-kevi-bahoaka, eo ihany koa ny lalàna momba ny fifidianna filoham-pirenena, ary ny lalàna mifehy ny fifidianana solombavambahoaka eny amin'ny Antenimieram-pirenena.
21.Fév.2018 20:07NATIONS UNIES, FIFIDIANANA : ZAVA-DEHIBE NY FAKAN-KEVITRA NATAON'NY GOVERNEMANTA
Manohana ny firosoan'i Madagasikara ny amin'ny fifidianana ny firenena mikambana ary mankasitraka ny fialana nenina sy ny fakàna hevitra maro nataon'ny governemanta momba ny lalam-pifidianana. Tsy ho ela intsony ny fivoriana ara-potoana hoy ny Praiminisitra.
21.Fév.2018 20:05ERIC RAZAFIMANDIMBY : SARO-BAHANA IREO OLANA NAVELAN'NY FITONDRANA TETEZAMITA TETO
Maro ny fanapahan-kevitra nampidi-kizo ny fanjakana malagasy izay noraisin'ny fitondram-panjakana tetezamita hoy ny minisitry ny asa vaventy Eric Razafimandimby androany. Porofon'izany ny fampiantonana ny redevance d'entretien routier tamin'ny 2011, mba ihazonana ny vidin-tsolika tsy hiakatra. Ankehitriny, tsy mety tafarina ny FER, noho ny tarazo navelan'izany.
20.Fév.2018 18:44ADY AMIN'NY KOLIKOLY : OLONA AMBONY 7 NANAOVAN'NY BIANCO TATITRA ENY AMIN'NY FITSARANA
Ady amin’ny kolikoly, manam-pahefana ambony miisa 7 no nanaovan’ny Bianco tatitra eny anivon’ny fitsarana, fa tsy nahavita fanambaram-pananana tamin’ny taona 2017 teo. Mbola maro hatramin’izao ireo tsy nahavita ity fepetra takian’ny lalàna ity. Raha ny tarehimarika farany, ny 27%-n’ireo tokony hanatitra ity antontan-taratasy ity teny anivon’ny bianco no mbola tsy nahavita izany, tamin’iny taon-dasa iny.
20.Fév.2018 18:05FANEHOAN-KEVITRA : TSY TOKONY HANOME LESONA IREO NAMARINA AN-KADY NY FIRENENA HOY I RIVO RAKOTOVAO
Tsy misy tokony hiseho ho mpanome lesona ireo mpanao politika efa nitondra ary namarina an-kady ny firenena na iza na iza, hoy i Rivo Rakotovao, Filoha nasionalin'ny antoko HVM amin'izao fotoana izao.Tsy maintsy asehon'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fifidianana ny safidiny, sy izay tsapany fa nahavita ary mahavita mametraka izay mahasoa ny fireneny. Tsy adinon'ny vahoaka ny tena zava-nisy sy ny korontana ary ny fitotonganan'ny firenena nandritra ny vanim-potoana tetezamita na inona na inona fanadiovana atao amin'izany. Tsy mora hoy ny filoha nasionalin'ny HVM ny namerina izany tamin'ny laoniny, sy ny fanarenana ity firenena ity.
20.Fév.2018 13:22BALA 10 900 HITA TETSY ANALAKELY : IZA NO TOMPONY
Saika atao inona ireo bala 9 in-jato sy 1 alina hita tamin'ny trano iray tetsy Analakely farany teo. Iza no tompony ? iza no nanao azy tao, oviana no efa tao izany. fanontaniana maro no hiandrasam-baliny ankehitriny mahakasika ireo fitaovam-piadiana ireo. Fitaovam-paidiana izay fampiasa amin'ny tany miady, ary mahery vaika.
20.Fév.2018 13:00RAHARAHAM-PIFIDIANANA : TSY MAHAGAGA NY FANEHOAN-KEVITR'I ANDRY RAJOELINA
Tsy mendrika hovaliana akory ny fanehoan-kevitry ny mpitarika ny Mapar Andry Rajoelina hoy ny minisitry ny serasera raha nanontanian'ny mpanao gazey omaly. Ho an'ny senatera hafa kosa dia fanadiovan-tena ara-politika ireny mba hambaboana ny fon'ny vahoaka, noho ny firosoana any amin'ny fifidianana. Maro ireo tranga toy ny fahapotehan'ny kolo-tsaina sy ny soatoavina maha-malagasy, ny toekarena, ny sazy mavesatra nitambesatra sy nampikatso ny fandrosoan'i Madagasikara noho ny fitarazohan'ny tetezamita no nodiany tsy noresahina. Niharihary ihany koa ny nialàny tamin'ilay fanontaniana momba ny Taux de croissance.
16.Fév.2018 17:21FAHASALAMANA : VOAPOROFON’NY INSTITUT PASTEUR TETO ANTANANARIVO NY FISIAN’NY GRIPA A H1 N1.
Voaporofon’ny institut pasteur teto antananarivo ny fisian’ny gripa a h1 n1. Tsy tokony hisy hampikoropaka izany hoy ny minisitry ny fahasalamana fa gripa toy ny gripa rehetra ihany. Mampivalana sy mitovy amin'ny tazo ny fisehony, izay no mampiavaka an'ity gripa mahery ity. Voafehintsika ny fitsaboana azy. Any Toamasina, faritra Atsinanana no tena lasibatra amin’izany. Ny fiovaovan’ny toetr’andro ary indrindra ny hamandoana vokatry ny fandalovan’ny AVA teo sy ny loto mpiritaka no anton’izany. Raha vao misy seriserena ny iray amin’ny ao an-tokantrano dia tokony hanantona mpitsabo avy hatrany.
15.Fév.2018 19:07FAMPIANARANA : MPIANATRA 600 TSY MANANA "ENCADREUR"
Eny amin'ny Oniversité, andiany na Promotion telo tao amin’ny departeman’ny fitantanana ao amin’ny oniveristen’Ankatso no mbola tsy nahavita boky hatramin’izao. Ny tsy fisian’ireo mpampianatra afaka manao "encadrement", izany hoe mitarika azy ireo no olana amin’izany. Manome fotoana ho an'ireo tomponandraikitry ny minisitera sy ny Oniversite hatramin'ny Talata ho avy izao ireo mpianatra hamahàna ny olana raha tsy izany dia hitokona izy ireo.
15.Fév.2018 19:01FAHASALAMANA : VEHIVAVY 75 000 ISAN-TAONA NO MANALA ZAZA ETO MADAGASIKARA
75 000 no vehivavy manala zaza isan-taona eto Madagasikara. Manodidina ny 600 eo ny vehivavy maty noho ny fanalan-jaza. Mbola vitsy anefa ireo olona voasazy eto amintsika amin’ ity tranga ity, na ilay vehivavy nanala zaza na ireo mpiray tsikombakomba aminy amin’ny fanatanterahana izany. Vao tamin’ny 2017 teo no lany teny anivon’ny antenimieran-doholona ny volavolan-dalana mikasika ny tsy faneken’i Madagasikara ny fanalana zaza.
13.Fév.2018 19:37ETAZONIA : VOVOKA TSY FANTA-PIAVIANA, NAMPIDIRINA HOPITALY I VANESSA TRUMP
Maresaka iraisam-pirenena, nampidirina Hopitaly maika ny vinanton'ny Filoha Amerikana Donald Trump, omaly maraina. Ny nanokafan'i Vanessa Trump, vadin'ny Donald Trump Junior, taratasy izay nahitàna vovo-javatra no anton'izany. Taratasy izay tokony ho nosokafan'ny vadiny. Hatreto, raha ny ampaham-baovao azo, tsy mankarary io vovo-javatra tsy fanta-piaviana io.
13.Fév.2018 19:32PLAZA AMPEFILOHA : AMPIASAIN'NY FANJAKANA ISAN-KERINANDRO
Tsy ny fijerena sarimihetsika ihany hatao amin’ny Plaza Ampefiloha. Isan’ny mahazo tombon-dahiny manokana amin’ny fisiany eto an-drenivohitra ny mpianatra Malagasy. Androany, 400 izy ireo, avy amin’ny Lycée efatra eto an-drenivohitra no nandray anjara tamin’ny Ciné-débat. Fandaharan'asa tarihin’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena izy io, ary tanterahina isaky ny talata tolakandro, ao amin’ny plaza.
13.Fév.2018 19:29TEAM BUILDING MANTASOA : HAFAINGANINA NY ASA
Fametrahana paikady hanatanterahana asa ao anatin'ny fohy ezaka, io no ivon'ny fivoriana ataon'ny governemanta any Mantasoa amin'izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny Vina Fisandratana 2030 napetraky ny Filohampirenena Hery RAJAONARIMAMPIANINA izao fivoriana izao hoy ny Praiminisitra, izay mitarika izany. Tonga nanokatra izany ny Filohampirenena androany maraina.
13.Fév.2018 12:37MANKALAZA NY ANDRO IRAISAM-PIRENENA HO AN’NY RADIO ISIKA AMIN’ITY 13 FEBROARY ITY.
Mankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an’ny radio isika amin’ity 13 febroary ity. Ho fanamarihana izany, hiara-hanonja amin’ny Radio Nasionaly Malagasy amin’ny mari-drefy 99.2 avokoa ny radio rehetra, anio tolakandro, manomboka amin’ny 2 ora hatramin’ny 5 ora hariva. Tsiahivina fa tamin’ny 13 febroary 2012 no nanamarihana voalohany ity andro iraisam-pirenena ho an’ny Radio ity, araka ny fanapahan-kevitry ny firenena mikambana. Lohahevitra banjinina amin’ity anio ity ny momba ny Radio sy ny fanatanjahantena.
13.Fév.2018 12:16TEAM BUILDING GOVERNEMANTA : NANOKATRA IZANY NY FILOHAM-PIRENENA
Nanomboka ny maraina teo tany Mantasoa ny Team Building, iarahan’ny governemanta. Raha ny vaovao azo avy any an-toerana ny maraina teo dia tonga manontolo ny mpikambana ny mpikambana amin’ny governemanta manatrika izany. Eo ihany koa ireo teknisiana eo anivon’ny minisitera tsirairay avy. Nanokatra tamim-pomba ofisialy ity dinidinika iarahan’ny governemanta ity, tany Mantasoa ny maraina teo ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina.
12.Fév.2018 19:08RUSSIE : NIDARABOKA NY FIARAMANIDINA ANTONOV IRAY, 71 NO MATY
Efa-bolana mialoha ny fiadiana ny amboara eran-tany amin'ny taranja Baolina Kitra, niteraka ahiahy any Russie, ny lozam-piaramanidina nitranga omaly. Fiaramanidina Antonov, izay isan'ireo ho ampiasaina mandritra ny Coupe du monde ity nianjera ity. Hatreto, fantatra fa tsy misy ifandraisany amin'ny resaka fampihorohorona izany. 71 no maty.
12.Fév.2018 18:56ENAWO : 700 TAPITRISA DOLARA NY FAHAVOAZANA NAVELANY
430 000 ireo traboina, 250 ireo naratra, 81 no maty, nahatrarta 700 tapitrisa dolara ny fahavoazana navelany, mafy ny takaitra sy ny fahasimbana navelan'ny rivo-doza Enawo. Nanao tatitra momba izany ny firenena mikambana, ny BNGRC, ary ny Primatiora androany teny Mahazoarivo. Hanampy bebe kokoa an'i Madagasikara amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary amin'ny manarka nytraik'efa sy ny fandrindrana ny asa nentina niatrika iny rivo-doza iny izay isan'ny mafy indrindra teto, tato anatin'ny 10 taona farany.
12.Fév.2018 18:49LALAM-PIFIDIANANA : AHITANA IREO VOTOATINY IRAISAN'NY TANY DEMOKRATIKA REHETRA
Momba ny lalàm-pifidianana, nanambara ny Praiminisitra lehiben'ny governemanta androany fa tsy hisy zavatra betsaka hiova ao anatin'ireo lalàm-pifidianana. Efa eo am-pamaranana tanteraka ireo volavolan-dalàna ireo ny Governemanta miaraka amin'ny Filohampirenena amin'izao fotoana izao. Tsy nisy notsinotsinoavina avokoa ireo tolo-kevitra sy soso-kevitra avy amin'ny ankolafy isan-karazany amin'ny fandrafetana izany hoy ny Praiminisitra.
12.Fév.2018 18:47GRIPA MAHERY : VOA MAFY ANTANANARIVO, NY ZAZAKELY NO TENA LASIBATRA
Fahasalamana. Tsy maharaka ny Hopital des enfants etsy Tsaralalana. Be laotra ny ankizy sy ny zaza no marary. Miparitaka eto Antananarivo ny gripa. Somary mahery kokoa noho no nahazatra hatramin'izay anefa ny gripa misy amin'izao fotoana izao, ary mahita fiasana amin'izany ny zazakely. Ny fanaviana, ny fiakaran’ny hafanana, koha-maina ary ny maso mena, ireo amin’ny ankapobeny no endrika hisehoan'io gripa io. Azo atao tsara ny misoroka izany hoy ny mpitsabo.
12.Fév.2018 18:44ANTANIMORA : NISY GADRA 4 INDRAY SAIKA TAFAPORITSAKA
Raha ny vaovao azo io atoandro io avy eny amin'ny Fonjan'Antanimora, gadra miisa 4 indray no nikasa ny hivoaka ny fonjan'Antanimora io atoandro io tamin'ny 11 ora. Efa tafavadika tany amin'ny faritra hafa izay tsy tokony hisy azy ireo ireto gadra 4 ireto. Ny 2 efa tafidina, ny 2 hafa kosa mbola teo ampananihana ny tamboho. Hatreto, raha ny fanazavan'ny Talen'ny saraseran'ny Minisiteran'ny Fitsarana, isan'ny olona lehibe ka mahatonga ny voafonja ho afaka moramora mitsoaka tahaka izao ny fahanteran'ny fotodrafitrasa. Momba ireo 3 tafaporitsak any alin'ny sabotsy kosa, niaiky ny minisitera fa nisy ny firaisan tsikombakomba.
12.Fév.2018 09:39FANDRIAMPAHALEMANA : GADRA 3 NANDOSITRA AN'ANTANIMORA
Ireto ny mombamomba ireo gadra 3 nandositra ny fonjan'Antanimora ny faran'ny herinandro teo. 1) RAKOTOARISOA HENINTSOA RAPHALQUE26 taona, mirefy1,47m, misy holatra eo amin'ny hatony, ny tratrany ary ny sandriny.Migadra 15 taona noho ny vono olona sy halatra 2) RAFALIMANANA NIRINA JEAN29 taona, mirefy 1,59m, misy tatouage eo amin'ny avant-bras havanana.Migadra mandram-pahafatiny noho ny fanaovana vola sandoka; 3) RAHARIJAONA SOLOFONIAINA (tsy nanome ny sariny ny fonja)20 taona, mirefy 1,75m, misy tatouage sary fo sy soratra "fidèle" eo amin'ny avant-bras havanana, ary soratra "solofo" eo amin'ny sandriny havanana. FANAMARIHANA avy amin' ny zandarimariam-pirenena: Raha ny tokony ho izy dia vao mahafantatra ny fandosirana ny tompon'andraikitra eny amin'ny fonja dia efa milaza haingana amin'ireo tobin'ny Hery rehetra akaiky azy nny zava-mitranga sy ny mombamomba ny gadra nandositra mba ahafahana eo noho eo ihany manao ny fanenjehana sy fanakanana. Manaraka ho azy aoriana ny fanaovana ny avis de recherche izay "formalités" an-taratasy. Tsara ny hahafantaran'ny olona fa misy isan'alina ny mpanao fisafoana ataon'ireo mpitandro ny filaminana ankoatra ireo "piquet" izay fiandry afaka manampy raha ilaina indrindra moa amin'ny trangana "évasion" toa izao.
09.Fév.2018 19:10MINISITERAN’NY PAOSITRA: TANIM-PANJAKANA AMIDY 5000 AR / M² ?
Ny Ministeran’ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra ary ny Fampivoarana ny Haitao ara-kajy mirindra, dia manamafy, fa tsy mbola nisy, ary tsy manana fikasana hivarotra, amin’ny ampahany na manontolo, ny tanim-panjakana izay misoratra aminy. Ary tsy mbola nisy fanomezana alalàna olona na vondron’olona hitonona ho avy amin’ny ministera, ka hivarotra ireo tanim-panjakana tantanany. Noho izany, ny Ministeran’ny Paositra dia manohitra tanteraka ny fanaisorana aminy ireo tany misoratra amin’ny ministera ary mampandre sy mampitandrina fa hitory eny amin’ny fitsarana, raha toa ka misy trangan-javatra ataon’olona na vondron’olona mifanohitra amin’izany.
09.Fév.2018 18:17FOTOAMBITA : ANDAO HIARAKA HIADY AMIN'NY KOLIKOLY HOY NY FILOHAM-PIRENENA, MIAINGA AMIN'NY TSIRAIRAY.
Mila fadiana ny manao kolikoly. Mila mitoroka ireo mpanao kolikoly. Tsy misy madinika na lehibe ny kolikoly hoy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina fa rehefa kolikoly dia kolikoly. Misy kolikoly eny amin'ny fokotany, misy kolikoly eny amin'ny kominina, Biraom-panjakana, misy kolikoly eny amin'ny arabe ary tsy iza no manao kolikoly fa isika, olom-pirenena ary olom-panjakana. Ny kolikoly avo lenta ihany no malaza saingy mandray anjara amin'ny fanapotehana ny firenena ihany koa ny olom-pirenena rehetra manao kolikoly hoy ny Filoha. Manainga ny malagasy rehetra hanomboka ny ady amin'ny kolikoly, amin'ny ezaky ny tsirairay ny filoha malagasy.
09.Fév.2018 16:57CINEMA PLAZA 10 FEBROARY 2018 : 3D AVOKOA NY HORONANTSARY ANDEHA
Horonantsary miisa 3 indray no hatolotra anao ao amin'ny Plaza ho an'ny rahampitso Sabotsy 10 febroary 2018. Amin'ny 10 ora maraina no handeha ilay horonantsary miaina "Moi Moche et Méchant 3" na ny "Despicable Me 3". Mbola horonantsary miaina ihany koa no manaraka azy amin'ny 2 ora tolakandro. "Les aventures de Tintin, le Secret de la Licorne" Amin'ny 4 ora sy sasany kosa ilay horonantsary "Destination finale 5". Samy 3 D avokoa ireo horonantsary 3. 10 000 Ariary isaky ny horonantsary iray kosa ny vidim-pidirana amin'izany.
09.Fév.2018 16:22HOUCINE ARFA : AHEMOTRA AMIN'NY 9 MARTSA NY FITSARANA
Mpanara-baovao maro no efa niandry tao amin'ny efitrano faha-5, tao amin'ny lapan'ny fitsarana Ambaratonga voalohany tetsy Anosy io maraina io, hatramin'ny 8 ora sy sasany. Fotoana izay tokony nanombohana S ny fitsarana ny raharaha Houcine Arfa. Noho ny fangatahan'ny mpisolo vava ity gadra nitsoaka ity, sy ny tsy fahitana azy hatramin'izao, dia nahemotra ho amin'ny 9 Marsa 2018 indray ny fitsarana. Raha tsiahivina, mbola hifampitadiavna'ny fitsarana malagasy sy ny fitsarana Frantsay ity gadra nitsoaka ity hatreto ary tsy mbola hitany misy azy, rehefa tafaporitsaka nandositra niala an'i Madagasikara izy, efa ho roa volana izao.
08.Fév.2018 18:07HCC : HANAO FIANIANANA RAHAMPITSO I RABETOKOTANY TAHINA
Hotanterahina rahampitso eny amin'ny ivon-toeran'ny Fitsaran avo Momba ny lalampanorenana, na ny HCC, ny fianianana ataon-dRamatoa Tahina Rabetokotany. Ny fahatongavany eny anivn'ny HCC izay mamerina indray ny isan'ny mpikambana ao amin'ity andrim-panjakana ity ho 9. Tsiahivina fa ny filoham-pirenena Hery Rajaoanrimampianina no nanendry azy ho eo amin'izany toerana izany. Hanatrika io fotoam-pitsarana manetriketrika io ny filoham-pirenenamalagasy rahampitso.
08.Fév.2018 14:48REAL DE MADRID vs PSG, 14 FEBROARY 2018 : LANY IREO TAPAKILA 81 000
Miandry fatratra ny lalao hifanandrinan'ny Real de Madrid sy ny Paris saint Germain izay hotanterahina ny 14 Febroary ho avy izao, ny mpankafy baolina kitra maneran-tany. Tao anatin'ny 37 minitra monja dia lany ny tapakila miisa 81 000 hijerena mivantana io lalao io izay atao any Madrid. Isan'ny lafo dia lafo anefa ny saran'ny vidim-pidirana amin'ity lalao lehibe ity ary 345 Euros ny vidin'ny toerana iray ambany indrindra amin'izany. Ao Madrid, Espagne no hotanterahina ity lalao ity. jifaina 345 Euro ny tapakila tsotra iray, rah toa ka tafakatra hatramin'ny 1645 Euro ny Vidin'ny famandrian-toerana.
08.Fév.2018 13:07 BELGIQUE : MISY MALAGASY TSY MANAN-KIALOFANA MATY, TSY FANTATRA NY HAVANY
Namoaka fanambarana ny Masoivoho malagasy any Belgique, fa misy teratany malagasy efa 74 taona, maty tany amin'ny Hopitaly iray any Anderlecht. Tsy fantatra ny havany na ny fianakaviana hatramin'izao, raha toa ka efa tamin'ny 14 janoary lasa teo izy no maty. Tsy voarakitra any an-toerana ny anaran'ity malagasy iray ity, n ny adiresiny, na iay mety ho havany. Araka ny voalazan'ity kominina iray any Belgique ity kosa dia avy any Frantsa izy io ary tsy manankialofana. Ny hany fantatra dia ny hoe Rakotonarivo Haritsoa no anarany, ary ny 27 / 12 / 1944 izy no teraka. Manao antso avo ny Ambasady malagasy any an-toerana ho an'ireo izay mety mahalala azy.